外伝14緬甸／မွနျမာ ミャンマー 首頁 – ダイエット遊記 外伝増々築
外伝14緬甸／မွနျမာ ミャンマー 首頁
သကျမုနိဗ ဒ္ဓ ထိုဟောကိန်းကို အစ
ပထမ ကြားသိရသောအခါ၌ ဘုရင်ကြီးသည် ၀မ်းမြော
က်ဝမ်းသာဖြစ်မိ လေသည်။ သို့ရာတွင် နောက်ပိုင်း၌ တစ်ဦးတည်းသော သားတော်က နန်းတော်မှ ထွက်ခွာ၍ေ
တာထဲ တွင် ရဟန်းဘ၀ဖြင့် တစ်ကိုယ်တည်း တရားအားထုတ်မည့် အလားအလာကို တွေးတောကာ စိုးရိမ်ပူပန် လာ
မိလေသည်။ အသက် (၇) နှစ်အရွယ်သို့ ရောက်ာသောအခါ မင်းသားသည် အဋ္ဌာရသ ပညာရပ်များကို စတ
င်သင်ကြားရသော်လည်း အေ တွးအခေါ်များမှာကား သဘာဝအလျောက် အခြားအရာများတွင် ပိုမို စိတ်ဝင်စားနေေ
လသည်။ နွေဦးပေါက်ရာသီတစ်နေ့တွင် မင်းသားငယ်သည် ဖခင်ခမည်းတော်နှင့် အတူ နန်းတော်မှ ထွ
က်လာပြီး၊ လယ်သမားတစ်ဦး လယ်ထွန်နေသည်ကို ရှုစားနေ လေသည်။ (ထေရ၀ါဒ အယူအရ လယ်ထွန်မင်္ဂလာဟု
ဖွင့်ဆိုသည်။ တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့) လယ်သမား၏ ထွန်တုံးကြောင့် မြေပေါ်သို့ ပေါ်လာသော တီကောင်ငယ်တစ်ကောင်အား ငှက်တစ်ကောင်က ပျံဆင်းလာကာ၊ ကိုက်ချီ သွားသည်ကို မင်းသားက တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်။ မင်းသားသည် သစ်ပင် တစ်ပင်၏ အရိပ်တွင် ၀င်ထိုင်ကာ၊ ယင်းအချင်းအရာကို တွေးတောလျက်၊
မိမိကိုယ်အား ဤကဲ့သို့ ရွတ်ဆိုနေမိလေသည်။ “သက်ရှိသတ္တ၀ါ အားလုံးသည် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေကြပါသည်တကား” ဖွားမြင်လာပြီး မကြာမီပင်၊ မိခင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရသော မင်းသားလေးသည်၊ ဤတိရစ္ဆှာန်ငယ် လေးများ၏ ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ အဖြစ်များကို ရှုစား၍ အထူးစိတ်ထိခိုက်နေမိလေသည်။ မင်းသားလေးတွင် ဤကဲ့သို့သော အတွင်းစိတ် နာကြည်းမှုဒဏ်ရာသည် အသက်ကြီးရင့်လာ သည်နှင့်အမျှ ဆထက်ထမ်းပိုး တိုးပွားလာခဲ့လေသည်။ အပင်ငယ်လေးတွင် ရှိသော ဒဏ်ရာကဲ့သို့ပင် ၄င်း၏ စိတ်ထဲ၌ လူ့ဘ၀၏ ဒုက္ခဝေဒနာများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ စွဲမြဲလာလေသည်။ ရသေ့၏ ဟောကိန်းကို ပြန်လည် အမှတ်ရမိတိုင်း၊ ဘုရင်မင်းမြတ်မှလည်း
ပိုမိုစိုးရိမ်ကြောင့်ကြလာသဖြင့် မင်းသားလေး ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်အောင် ကြိုးစား သကျမုနိဗုဒ္ဓ ဆောင်ရွက်သည်။ အခြားသော နန်းတွင်းရေး လောကီရေးများတွင် စိတ်ပါဝင်စား လာအောင် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လေသည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်သည် အသက် (၁၉) နှစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သော မင်းသားအား ယသော်ဓရာမင်းသမီးနှင့် ထိမ်းမြားပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လေသည်။ ယသော်ဓရာမင်းသမီးသည်
ကွယ်လွန်သွားသူ မာယာ မဖုရား၏ မောင်တော်ဖြစ်သူ၊ ဒေ၀ဒဟပြည့်ရှင် သုပဗဗုဒ္ဓမင်း၏ သမီးတော် ဖြစ်လေသည်။ ၃. နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း၊ စံနန်းတော် အမျိုးမျိုးတို့တွင် (၁၀) နှစ်တိုင်တိုင် အတီးအမှုတ်အဆိုအကတို့နှင့် ပျော်ရွှင်မှုမျိုးစုံတို့ဖြင့် စံမြန်းနေခဲ့ရသော်လည်း မင်းသား၏ အတွေးမှာမူ နှလုံးမသာမယာဖြင့် လူ့ဘ၀၏ အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ကြိုးပမ်းလျက်နှင့်ပင်၊ လူ့လောက၏ ဒုက္ခများကို တွေး တောနေမိလေသည်။ “နန်းတွင်းစည်းစိမ်များနှင့်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ဤကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အတူ ၊ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေ သော လူငယ်ဘ၀၊ ဤသည်တို့မှာ ကျွန်ုပ်အတွက် ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါသနည်း” ဟု သူက တွေးမိလေ သည်။ “တစ်နေ့နေ့တွင် ကျွန်ုပ်တ့ို ရော ဂါဝေဒနာ ခံစားကြမည်။ အိုမင်းရင့်ရော်လာမည်။ သေခြင်းတရား မှ ကင်းလွတ်နိုင်မည် မဟုတ်။ နုနယ်ပျိုမျစ်သည့် မာန၊ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းသည့် မာန၊ အသက်ရှင် နေသည့် မာန၊ ဤသည်တို့ကို တွေးတောဆင်ခြင်တတ်သူတိုင်း၊ စွန့်လွှတ်သင့်ပေသည်။ “အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူသည် သဘာဝအလျောက်၊ တန်ဖိုးရှိသည့် အရာ တစ်ခုခုကို ရှာကြံပေသည်သာ ဖြစ်သည်။ ရှာကြံနည်း ၂-မျိုး ရှိပေသည်။ အမှန်လမ်းနှင့် အမှားလမ်းတို့ ဖြစ်သည်။ မှားသောလမ်းကို ကြည့်မြင်သည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ ဖျားနာခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းနှင့် သေခြင်းတို့ကို ရှောင်ကွင်း၍ မရနိုင်ကြောင်း၊ သိနေလျက်နှင့်ပင်၊ အဆင့်ချင်း တူညီသော၊ ဗလာဖြစ်သည့် မတည်မြဲ သောအရာများတွင် ရှာကြံနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ “လမ်းမှန်ကို ကြည့်မြင်ခြင်း အဓိပ္ပာယ်မှာ၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း
သကျမုနိဗုဒ္ဓ သဘောတို့၏ သဘာဝ အစစ်အမှန်ကို သိမြင်၍ လူ့ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကို ကျော်လွန်နိုင်သည့် အဓိပ္ပာယ်ကို ရှာကြံခြင်းပင် ဖြစ် သည်။ သာယာပျော်ရွှင်မှု အတိရှိသော ဤထီးနန်းစည်းစိမ်တွင် ကျွန်ုပ်သည် မှားယွင်းသည့် လမ်းစဉ်၌ ရှာဖွေနေခြင်းပင် ဖြစ်ဟန်ရှိပေသည်။” (ထေရ၀ါဒအမြင်အရ နိမိတ်ကြီး (၄) ပါး မြင်တွေ့ရပြီး တောထွက် သည်ဟု ဖွင့်ဆိုသည်။ တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့) ၄. ဤသို့ဖြင့်လျှင် မင်းသား၏ ရင်တွင်းဝယ်စိတ်၏ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများ
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာ ရာ၊ သိဒ္ဓတ္တမင်းသားသည် အသက်၂၉-နှစ် အရွယ်ရောက်မှ
သားဖြစ်သူ ရာဟုလာကို ဖွားမြင်လေသည်။ သားတစ်ဦး ထွန်းကားလာသောအခါ
မင်းသားသည် နန်းတော်မှ ထွက်ခွာကာ၊ စိတ်ချမ်းသာမှု ရှာရန် အဖြေရှာကြံနိုင်ရန်
တောထွက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ညတစ်ညတွင် မင်းသား သည် ၄င်း၏ မြင်းရထားမောင်းဖြစ်သူ ဆန္ဒကိုခေါ်၍ မြင်းဖြူတော် ကဏ္ဍကကို စီးနင်းကာ နန်းတော်မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့လေသည်။ ၄င်း၏ စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခများမှာ အဆုံးသတ်သွားခြင်း မရှိဘဲ မာရ်နတ်သား ကလည်း “နန်းတော်သို့ ပြန်ပါ။ အခြားသော အဖြေမျိုးကို ရှာကြံလျှင် ပိုကောင်းပေမည်၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက စင်္ကြာဝတေးမင်း ဖြစ် ပေလိမ့်မည်” ဟု ဖြားယောင်း ပြောဆိုကြလေသည်။ သို့ရာတွင် လောကစည်းစိမ် မှန်သမျှသည် မိမိအား စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို ပေးနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ဟူသော အသိစိတ်ဖြင့် မင်းသားသည် မာရ်နတ်သား၏ ဖြားယောင်းပြောဆိုမှုများကို ငြင်းပယ်လေသည်။ မင်းသားသည် ဆံပင်များကို ဖြတ်ပယ်ပြီး၊ သပိတ်တစ် လုံးကို ပိုက်ကာ တောထွက်ခဲ့သည်။
မင်းသားသည် ရှေးဦးစွာ ဆရာရှာရန် ရသေ့တို့ထံသို့ သွားရောက်၍ တစ်ကိုယ်တည်း ပြင်းထန်စွာ တရားကျင့်ကြံနေထိုင်ပုံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာ လေသည်။ ထို့နောက် မင်းသားသည် ကမ္မဌာန်း ထိုင် ခြင်းဖြင့် နိဗ္ပ္ဗာန်သ့ို ရောက်ရှိစေရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည့် အာဠာရကာလာမနှင့် ဥဒကရာမပုတ္တတို့၏ တရားကျင့်နည်းများကို သွားရောက်လေ့လာပြန်လေသည်။ သို့ရာတွင် မိမိ ကိုယ်တိုင် အတန်ကြာ ကျင့်ကြံကြည့်ပြီးသည့်နောက်၌ ဤနည်းများဖြင့် သကျမုနိဗုဒ္ဓ သဗ္ပ္ဗညုတဥာဏ်ကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ကောင်းစွာ သဘောပေါက်လာ မိလေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် မင်းသားသည် မဂီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ ဂယာမြို့ အနီး၌ ဖြတ်စီးသွားသော နေရဉ္စရာ မြစ်ကမ်းပေါ်ရှိ၊ ဥရုဝေလတောကြီးထဲတွင်
တစ်ကိုယ်တည်း ပြင်းထန် စွာ တရားကျင့်ကြံလေသည်။
၅. မင်းသား၏ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများမှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင် ပြင်းထန်လှလေသည်။ “မင်ားးလောက် စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြစွာဖြင့်၊ တရားကျင့်ကြံ ခဲ့ဘူးသော၊ သို့မဟုတ် ကျင့်ကြံမည်ဖြစ်သော၊ ရသေ့ဟူသည်၊ အတိတ်ကာလ၌ သော်လည်းကောင်း၊ ပစ္စုပ္ပန်၌သော်လည်းကောင်း၊ အနာဂါတ်၌သော် လည်းကောင်း ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်” ဟု နောင်တွင်ဆိုစမှတ်ပြုလောက်အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ကျင့်ကြံနေလေသည်။ သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ မင်းသားသည် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ တောထဲ၌ ၆နှစ်ကြာအောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်ပြီးသောအခါတွင် မင်းသားသည် ဒုက္ကရစရိယာကို စွန့်လွှတ်လိုက် လေသည်။ သူသည် နေရဉ္စရာ
မြစ်ထဲတွင် ရေချိုးပြီးသ ည့်နာက် ၊ အနီးအနားကျေးရွာမှ သူဌေးသမီး ဖြစ် သူ
သုဇာတာ လှူဒါန်းသော ဃနာနို့ဆွမ်းကို လက်ခံလိုက်လေသည်။ မင်းသားနှင့်အတူ ၆-နှစ်တိုင်တိုင် ဒုက္ကရစရိယာကို ကျင့်ကြံခဲ့ကြသော ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ၅ပါးတို့သည် မင်း သားက လုံမပျိုတစ်ဦး၏ လက်မှ ဃနာနို့ဆွမ်း လက်ခံယူကြောင်း တွေ့ရှိကြရသောအခါ တအံ့တသြ ဖြစ်နေကြလေသည်။ ဤ ရဟန်းသည် ကမ္မဌာန်း လူထွက်ပေတကားဟု အပေါင်းအဖော်များက ထင်မှတ် ကာ စွန့်ခွာသွားကြလေသည်။ (ထေရ၀ါဒ အမြင်တွင်မူ အစာအဟာရ မစားပဲ ကျင့်တာတာင်၊ ဘုရား အဖြစ်သို့ မရောက်နိုင်။ ယ္ခုလို ဃနာနို့ဆွမ်းကို ဘုန်းပေးလျှင် အဘယ်မှာ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို ရနိုင်မည်နည်းဟု ကဲ့ရဲ့ အထင်သေးကာ စွန့်ခွာသွားကြ လေသည်) မင်းသားသည် တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ သူသည် အင်အားချိနဲ့ သကျမုနိဗုဒ္ဓ နေဆဲဖြစ်သော် လည်း အသက် ဆုးရှုံးနိုင်သည့်အရေးကို လျစ်လျူရှုကာ “သွေးများ ကုန်ခမ်းပေစေ၊ အသားများ ဆွေးမြေ့ ပေစေ၊ အရိုးများ ကျေသွားပေစေ၊ သဗ္ဗညုတဥာဏ်ကို ရောက်ရှိနိုင် ရာလမ်းကို မတွေ့မချင်း ငါ၏ လုံ့လ ကို အနည်းငယ်မျှ မလျှော့၊ ငါ၏ တင်ပလ္လင်ခွေကို မဖြေမလျှော့တော့” ဟု အဓိဌာန်ကာ၊ ထပ်မံ၍ တရား ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြန်လေသည်။ ပြင်းထန်လှပြီး၊ မနှိုင်းယှဉ်သာသော ဇွလဲုံ့လမှုပင် ဖြစ်လေသည်။ ၄င်း၏ စိတ်မှာ၊ ထိန်းမနိုင် သိမ်း မရဖြစ်ပြီး၊ ရှုပ်ထွေးနေသော အတွေးများဖြင့်
ပြည့်နှက်နေရုံသာမက စိတ်ဓာတ်တစ်ခုလုံးကို အမှောင် ရိပ်များ လွှမ်းခြုံနေကာ၊
မာရ်နတ်တို့၏ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုများကို အလူးအလဲ ခံနေရသလို ခံစား ရလေသည်။ သို့ရာတွင်၊ သူသည် စိတ်ရှည်စွာနှင့် သတိတရားကြီးစွာဖြင့်
တစ်ခုချင်းစီကို စစ်ဆေး လေ့လာကာ၊ အားလုံးကို ပယ်ချလိုက်လေသည်။ ဤတရားကျင့်ကြံမှုသည်ကား အမှန်တကယ်ပင် ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းလှသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိလေသာကျင့်စဉ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၄င်း၏ အသွေးများကို ခြောက်ခမ်းစေရုံသာမက အသားများကို လျော့နည်းသွားစေကာ၊ အရိုးများကိုလည်း ကွဲကြေသွားစေနိုင် လောက်အောင် ပြင်းထန်ပေသည်။ သို့ရာတွင် အရှေ့ကောင်းကင်ယံ၌ မိုးသောက်ကြယ် ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ဘုရားအလောင်း တော်၏ ကိလေသာတဏှာ၏ ချုပ်ရာငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ်တရားကို သိမြင်ရရှိသွားလေသည်။ မင်းသား၏ စိတ်သည် မိုးလင်းချိန်ကဲ့ သို့ပင် ကြည်လင် တောက်ပနေလေသည်။ သူသည် အရဟတ္တဖိုလ်ပေါက်၍ ဘုရားအဖြစ် သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်ကို ရရှိသွားပေပြီ။ ထိုနေ့သည် ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ (မြန်မာလူမျိုးတို့ အဆိုအရ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ခု အဆိုအရ ကဆုန်လပြည့်နေ့) ဖြစ်၍
မင်းသားသည် သက်တော် (付録：仏様リンク集) နှစ်အရွယ်၌ ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်၍ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို ရရှိတော်မူသည် ဖြစ်သွားလေ သည်။
投稿者 dai_etuto_chuui投稿日: 2015年12月28日 2020年12月28日 カテゴリー 外伝14 緬甸狂瀾編
前 前の投稿: 不断にアレンジが加えられ続けること@ことばぐすい
次 次の投稿: 外伝14緬甸／တရေ့တာဝမျးသာပါတဟျトェヤタァ ワンタァパァデェ｛準備するもの｝ビルマ再三訪のお支度